BitTorrent Sync dia safidy tsara amin'ny Dropbox na Google Drive | Androidsis
BitTorrent Sync dia serivisy fitehirizana izay anao ny data
Manuel Ramirez | | Nohavaozina tamin'ny 22/02/2016 12:37 | Fampiharana Android, Tutorials
Androany aho dia afaka nahita serivisy mahaliana izay hahafahanao ho tonga ny tena tompon'ny rakitrao hampifanarahana azy ireo amin'ny fitaovana tsy tambo isaina hitahirizan'izy ireo azy hatrany. Fahagagana mahafinaritra be dia be ny fisehoan'ny BitTorrent Sync satria ankoatry ny fanolorana io fampiasa lehibe io dia hanana safidy data tsy manam-petra miaraka amin'izay koa ianao fa ho avo dia avo ny data transfer.
Maro aminareo no ho tonga taloha tamin'ny serivisy toa an'i Dropbox, Google Drive na Box, izay mampakatra ny rakitrao amin'ny mpizara azy hahafahany mampifanaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovanao samihafa, mba hanitarana ny fahatsiarovanao ao anaty findainao, na izay tsara kokoa, dia manaova kopia backup raha misy izany very anao. BitTorrent Sync dia mandeha lavitra, ary manolotra fomba tsy mampino hiditra amin'ny angon-drakitrao tsy mila mampakatra azy ireo amin'ny mpizara ivelany, satria hampiasa ny kaonty BitTorrent ho an'ny fifanakalozana iray ihany izy io, manolotra miaraka amin'ny filaminana sy ny fiainana manokana, satria vitsy no afaka manolotra.
BitTorrent Sync dia rafitra fizarana rakitra izay mifototra amin'ny protokol BitTorrent, ary tsy mitovy amin'ny karazana rindrambaiko hafa amin'ny fomba fampifandraisany eo amin'ny fitaovana. Raha tokony apetraka ao amin'ny mpizara an-tserasera ny fisie isaky ny fitaovana alaina ao, Ny famindrana rakitra dia atao eo anelanelan'ny rakitra. Amin'izay dia tratra fa tsy misy fetrany ny tahiry angona na ny hafainganana famindrana.
BitTorrent Sync dia manafaka ny fifamoivoizana eo anelanelan'ny fitaovana miaraka amina encryption AES sy lakile 256-bit noforonina mifototra amin'ilay "miafina", izay tsy natao ho an'ny fampirimana namboarina ihany, izay handefasanay sy handraisana rakitra. BitTorrent Sync dia mampiasa fomba manokana hizarana ireo lahatahiry antsoina hoe "miafina": lakile Base21 32-bit.
Rehefa manampy fampirimana fampandrindrana fitaovana ny fitaovana iray dia hiteraka "tsiambaratelo". Manomboka amin'io fotoana io, ny fitaovana rehetra izay te-hampifandray izany fampirimana izany dia tsy maintsy fantatrao ny teny miafinao ny "tsiambaratelo." Ny fampifanarahana dia tsy misy fetra amin'ny hafainganam-pandeha toa ny habeny, raha toa ka manana habaka kapila ampy ireo fitaovana roa ireo.
Raha liana amin'izany ianao Serivisy miorina amin'ny protokol BitTorrentAvy amin'ilay tranonkala iray ihany dia azonao atao ny manaraka ny torolalany hametrahana azy amin'ny birao ary avy eo ataonao amin'ny fitaovanao samihafa toy ny takelaka na finday avo lenta. Tadidio fa raha te hitazona ireo fisie tsy maintsy havaozina dia tsy maintsy velominao ireo fitaovana.
Tsy misy isalasalana, BitTorrent Sync dia tolo-kevitra mahavariana tena tompon'ny rakitra fa te hampifanaraka amin'ny fitaovana hafa izahay. Azontsika atao ny manadino ny mampiasa mpizara an'ny orinasa toa ireo malaza ato amin'ity karazana serivisy ity mba hananan'izy ireo ny fisie anay, na sary, horonantsary na inona izany.
Hizaha ny zava-nitranga tamin'ny NSA sy ny zava-niseho tato ho ato miaraka amin'ny Dropbox, BitTorrent Sync napetraka ho serivisy handraisana azy io manaraka izao. Azonao ampiasaina amin'ny Android, iOS, Windows Phone, Kindle Fire, Windows, Mac ary Linux izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » BitTorrent Sync dia serivisy fitehirizana izay anao ny data
Efa ela aho no nampiasa an'ity rafitra ity, ary hitako fa indraindray tsy mitambatra izy io, tsy fantatro izay mitranga fa tsy mifangaro matetika izy io.
Ny teboka iray tokony horaisina dia ny zavatra vakiana ihany, raha manamboatra rakitra ianao dia mety ampifanarahina aminy ary esorinao ilay farany dia mila mandrindra tahaka ny famakiana fotsiny ianao.
Ataoko amin'ny PC ny fanovana ary ampifanarahiko amin'ny vakiteny ihany ny fampirimana, ka manana ny farany amin'ny pc-ko foana aho.
Valiny amin'ny PEPE
Misaotra amin'ny torohevitra! Na dia manozona ny ony ho an'ny piratebay sy ny toy izany aza izy ireo dia vitsy ny fomba famindrana rakitra toa anao.
Fitsapana fanadinana DGT mivantana amin'ny Android-nao
Hankafy ny mpilalao mozika foobar2000 amin'ny Android izahay noho ny Kickstarter